Waa Maxay wax taaj oo kale duritaanka caaga - Shiinaha QiDi caaga caaryada
Waa Maxay wax taaj oo kale duritaanka caaga?
wax taaj oo kale duray caaga waa farsamo loo isticmaalay in ay qaabeeyaan caag ah oo ah qaab wax aad dooneysa in ay soo saaraan. Inta lagu jiro nidaamka is duritaanka wax taaj oo kale ah, polymers thermoplastic waxaa lagu mudaa saabka caaryada ah. Si arrintan loo sameeyo, kaabsal ee wax a kululaadaan si ay u mudi karaa galay saabka gobolka oo ah dareere. dareere Tani kulul waxaa looga soo tagaa si uu ku qaboojiyo in caaryada si qayb ka mid ah si fiican u hagaajin karo. Marka qeyb ka mid ah waxaa la saaray ka caaryada, wareegga kale si dhakhso bilaabi karaan.
Inkastoo wax taaj oo kale duray ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa biraha iyo dhalooyinka, waa geedi socod wax soo saarka gaar ahaan caan ah oo soo saarta qaybo ka mid caag ah.
Tallaabooyinka in wareegga habka wax taaj oo kale ah oo ka mid ah duray ku tirtirayaan, duray, qaboojinta iyo ejection.
Inta lagu guda jiro ku tirtirayaan, caaryada duro waa la diyaariyey, waayo, wareegga a by xidh ku tirtirayaan labada toortaha in ay u sameeyaan saabka caaryada meesha. Tani waxay xaqiijineysaa in qayb ka mid ah doorsoon yeelan doonaan muuqaalka siman ah oo ay wacan tahay qayb ka mid ah doorsoon waa in ay leeyihiin ku dhowaad jirin line halkaas oo toortaha kala duwan isugu yimid, maadaama ay tani waxay muujinaysaa in caaryada laga yaabaa in aan la ku tirtirayaan si adag ku filan.
Marka toortaha caaryada waxaa wada demisay, caaryada uu diyaar u yahay in ay sameeyaan qayb ka mid ah. Ka hor inta polymer ah waxaa lagu duraa caaryada, kaabsal ku kululaadaan si ay u sameeyaan dareere ah. polymer The dareere ah waxaa markaas mudaa caaryada dhex biiyaha ah. Kani waa heerka duro of habka wax taaj oo kale, oo waa marxaladda labaad ee wareegga afar marxalad ah.
Next, qayb ka mid ah waxaa ka tagay si uu ku qaboojiyo in caaryada for qadar Fundka of time. Marxaladda qaboojinta meel ka a seconds yar in dhowr daqiiqo iyada oo ku xidhan polymer ka qaadan kartaa loo isticmaalo in lagu soo saaro qayb ka mid ah. Iyadoo polymers qaar ka mid ah waxay u baahan yihiin si dhib leh wakhti kasta si uu ku qaboojiyo oo dhan, kuwa kale waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo. Waxaa oo dhan waxay ku xiran tahay qayb ka mid ah lagu soo saaray.
Marka qayb ka mid ah ayaa la qaboojiyey, caaryada duro waa la furi waxayna qayb ka mid ah waxaa la saaray ka caaryada. caaryada The mar kale aanan doonaa oo u diyaar garoobaan in ay wareegga soo socda.
Maxaa yeelay, saarayaasha ogeyn ilaa inta wareegga on wasakhahaasi ay yihiin, ay si sax ah saadaalin karaa qadarka qaybo caaryada ah soo saari doonaa saacad kasta. Tani waxay ka caawisaa saarayaasha ogaado sida saxda ah dad badan oo qaybaha ay u yeelan doontaa in ay soo saaraan maalin kasta, toddobaadkii iyo bishii la caaryada si buuxda u shaqaynaysa.